बिहान भक्ति: अनमोल | प्रार्थना अंकहरू
घर बाइबल पढ्ने योजना बिहान भक्ति: बहुमूल्य
PRECIOUS म्हालेकाजी द्वारा
मत्ती 26: 26-29:
जब तिनीहरू खाँदै थिए, येशूले रोटी लिनुभयो र यसको निम्ति धन्यवाद दिनुभयो, र त्यसलाई भाँचेर चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, “यो लेओ र खाओ। यो मेरो शरीर हो। २:26:२ And त्यसपछि उसले कचौरा लिएर कचौरा लिएर धन्यवाद चढायो र ती चेलाहरूलाई दियो। २ For किनकि यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका पापहरूको क्षमाको लागि बहाइन्छ। २ :27 तर म तिमीहरूलाई भन्छु, अबदेखि म यो दाखको फल पिउँदिन, जबसम्म म मेरा बुबाको राज्यमा नयाँ दाखमद्य पिउँदिनँ।
आज, हामी आजको भक्तिमा अनमोल विषयलाई हेर्नेछौं। पापले मानिसको रगतमा असर गरेको तथ्य (आदम मार्फत) कुमारीको जन्म आवश्यक भयो। यदि ख्रीष्ट आदमको छोरा भएको भए, उहाँ पापरहित मानिस हुने थिएन। उसको शिरामा आदमको रगतको एक थोपा पानी थिएन किनकि उहाँ मानव बुबा हुनुहुन्न। एक मानिसको सन्तानले मरियमलाई ख्रीष्टको जन्मको लागि निषेचित गराइन। लुकाइएको शरीर मरियमको थियो, तर उसको रगत पवित्र आत्माको थियो। र उहाँ कुनै मानव बुबा थिएन किनभने, उहाँ देहधारी दाऊदको वंश थियो।
येशूको शरीर days दिन पछि विघटन भएन, तर लाजरसको शरीर3दिन पछि भयो (भजनसंग्रह १ 4:१०) उहाँको शरीरमा बगेको रगतको प्रत्येक थोपा पानी अझै अस्तित्वमा छ र यो उसको घाउहरूबाट बगिरहेको झैं ताजा छ। येशूको रगत हामीले प्रार्थनामा प्रयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। रगत प्रार्थनामा लहराउनुहोस् र यसले तपाईंको लागि बोल्नेछ (हिब्रू १२:२:16)। यसले हाबिलको रगतले मृत्यु र बदलाको लागि चिच्याएको छ भने जीवन र क्षमा कुरा। येशूको रगत जुनसुकै प्रयोग गरिएको छ वा विश्वासद्वारा याचना गरिएको छ, शैतानले त्यस व्यक्ति वा परिस्थितिलाई लागू गर्न सक्दैन जुन लागू हुन्छ। ऊ येशूको रगतमा जान सक्दैन।
शैतानले येशूको रगतको प्रतिरोध गर्न सक्दैन।
येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको रूपमा, तपाईंको सुरक्षा र लुक्ने ठाउँ रगत मुनि छ। यो रगतमा विश्वास हो जुन तपाईंलाई शैतान र तपाईंले सामना गर्न सक्ने हरेक समस्यामाथि विजय दिन्छ। यसलाई विश्वासद्वारा लागू गर्नुहोस् र तपाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि "रगतमा सामर्थ्य शक्तिशाली छ"
१. शैतान, मैले तपाईंको विरुद्धमा येशूको रगत पक्रेको छु र घोषणा गर्दछु कि तपाईं येशूको नाममा स्थायी रूपमा पराजित हुनुभयो
२. म येशूको नाममा, येशूको रगतद्वारा होलीजको पवित्र प्रवेश गर्छु
Jesus. येशूको रगतद्वारा, म येशूमा यदि मेरो नाममा मेरो जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा स्थिरको भावनालाई बदनाम गर्छु
Jesus. येशूको रगतमा शक्ति प्रयोग गरेर, म मेरा सबै ढिलाइ गरिएका साक्षीहरू येशूको नाममा आगोले घोषणा गर्न आज्ञा गर्दछु
Jesus. येशूको रगत, बोक्सीविद्याको शक्तिमा मृत्युको इन्साफ ल्याउनुहोस् र येशूको नाममा मेरो हाँसो र उत्सवमा बाधा पुर्‍यायो
Jesus. येशूको रगत, येशूको नाममा शत्रुले मबाट लुटेका हरेक असल कुरा मलाई फिर्ता दिनुहोस्
I. म मेरो जीवनलाई घेरिएको छु र येशूको नाममा, येशूको रगतको साथ गर्न सक्दिन
उत्तर दिएका प्रार्थनाहरूका लागि धन्यबाद प्रभु
यर्मिया 7: 9
एफिसी 1: 7
अघिल्लो लेखमामित्रताको बारेमा Bible० बाइबल पदहरू
अर्को लेखमामोर्निंग विकास: समय पुनः छुट्याउँदै
युद्दका प्रार्थनाहरू खराब आदेशहरू रद्द गर्न
टूटेको सम्बन्धको लागि प्रार्थना
Day दिन प्रार्थना र परिवारको चक्र तोड्न उपवास ...